Iphupha malunga neNqaku leBhanki ▷ ➡ Discover Online ▷ ➡️
Inqaku lebhanki yithenda esemthethweni ekhutshwa ngohlobo lwesatifikethi liziko eligunyazisiweyo. Ixabiso ngqo kunye neyunithi yemali zibonisiwe kwimali engamaphepha. Zihlala zibhekiswa njengemali engamaphepha okanye imali yamaphepha.
1 Uphawu lwephupha «imali engamaphepha» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «imali engamaphepha» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inqaku lebhanki» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imali engamaphepha» - ukutolikwa ngokubanzi
Xa imali ngohlobo lwemali engamaphepha iba sisihloko sebali lamaphupha, iingxaki kwi el mundo yomlindelo uhlala ubhengeza. Itikiti elinye lidla ngokufuzisela elilandelayo ilahleko Nomsindo. Okona kubi kunokubangela nentiyo kwaye ukuziphindezela bonisa kwindawo yokuphupha ngalo mfanekiso unjengephupha.
Ngamanye amaxesha imali ebhalwe ebhankini okanye itsheki inokubonisa ukuba ngamanye amaxesha iphupha lenza into ebangayo kwaye ngenxa yoko lingathandwa ngoontanga bakho. Ukuba uyaluqonda olu phawu kuwe, kuya kufuneka uzithobe kancinane amaxesha ngamaxesha.
Ukuba amatyala amaninzi avela ephupheni lephupha, emva koko kuya kubakho ilahleko ngokulinganayo enkulu yemali. Ngendlela, oku kuyasebenza ukuba uphupha ngokunyuka kwamaxabiso, Oko kukuthi, ukwehla kwemali.
Ukuba iphupha libandakanya ukubala amatyala akho ephupha, imeko yakho iya kuba mandundu ebomini bokuvuka. Ukuba i-greenbacks inokubonwa kwilizwe lamaphupha, ke ubukhulu becala babhekisa kwiiprojekthi zangoku ezenziwa kude kakhulu.
Uphawu lwephupha «imali engamaphepha» - ukutolikwa kwengqondo
Imali ngohlobo lweengqekembe okanye amatyala ahlala ebizwa ngokuba kukutolika kwengqondo ngamaphupha. isilumkiso itolikwe, kuba ibhengeza ilahleko. Umphuphi kufuneka aqinisekise ukuba akachithi imali engaphezulu kunale anayo. Nangona kunjalo, ilahleko zinokunxulunyaniswa kungekuphela nemali, kodwa kunye ne-psyche yamaphupha, enokuthi ibe nzima kakhulu ukuba iphupha alibuphathi kakuhle ubomi bakho bomphefumlo.
Inqaku lebhanki linokubonisa kule meko ukuba ukuphupha kuzivavanya njani. Ke ngoko, lo mfanekiso wephupha unokuba ngu isicelo makube xa uphupha ukuba kufuneka uligwebe ixabiso lalo ngononophelo. Kunye nexabiso ekufuneka lihlawulwe liphupha kwiminqweno yakhe, kodwa nakwindlela aziphethe ngayo, kufuneka icace kuye xa ebona itikiti njengephupha.
Ukuba iphupha lixakekile kubalwa imali engamaphepha, oku kubonisa I-Avarice. Nangona kunjalo, ngokwendlela yengqondo, le nkanuko ayibhekiseli kwiindlela zoqoqosho, kodwa kwintsebenzo yentlalo: umntu ophuphayo angazama ukwenza okungakumbi ukuze axhamle kunokwabanye abantu.
Kuphando lwamaphupha, kubalulekile ukuba ivela phi imali yamaphupha. Ngaba umntu ophuphayo uyawafumana amatikiti okanye uwahambisa kwenye indawo? Kwingcaciso yamaphupha e-psychoanalysts, imali kunye namatyala zihlala zinamandla, impembelelo, kunye isini idityanisiwe. Imali engamaphepha inale ntsingiselo ngakumbi kumaphupha amadoda.
Uphawu lwephupha «inqaku lebhanki» - ukutolika kokomoya
Itikiti lithathwa njengomfuziselo ekutolikeni amaphupha okomoya. ukutshintshiselana ulwazi lokomoya itolikwe. Ngamanye amaxesha oku kukwabonisa iziphumo zeeprojekthi ezigqityiweyo.